कांग्रेस र एमाले विजयी, कहाँ कसले मार्यो बाजी ? – Annapurna Post News
May 15, 2022 sujaLeaveaComment on कांग्रेस र एमाले विजयी, कहाँ कसले मार्यो बाजी ?
कांग्रेस र एमालेले फहरायो विजयको झण्डा फहराएको छ । दुईटै पार्टीले एक एक पालिकामा बाजी मारेको हो । मनाङको चामे गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेका लोकेन्द्रबहादुर घले निर्वाचित भएका छन् ।
यसअघि पनि उनी अध्यक्ष थिए । उनले ३ सय २० मत ल्याएका छन् । प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका छिरिङ ध्वर्जे लामाले २ सय ७९ मत ल्याएका छन् । उपाध्यक्षमा भने कांग्रेसकी मिङमार ढोमा लामा निर्वाचित भएकी छन् । उनले ३ सय २५ मत ल्याइन्ए । प्रतिद्वन्दी एमालेकी आशकुमारी गुरुङले २ सय ७४ मत ल्याइन् ।
चामे गाउँपालिकामा २०७४ को स्थानीय तह चुनावमा पनि कांग्रेस उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । २०७४ को स्थानीय तहको अध्यक्षमा निर्वाचित लोकेन्द्रबहादुर घलेले फेरि ५ वर्ष चामे गाउँपालिका हुने अवसर प्राप्त गरेका हुन् । चामेस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार औपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी छ ।
वडा नम्बर ५ को अध्यक्षमा एमालेका कैले गुरुङ र कांग्रेसका फुर्पा छिरिङ लामाले बराबर ३०÷३० भोट ल्याएका छन् । यसअघि वडा नम्बर १ मा एमालेका खड्कजंग गुरुङ र वडा नम्बर २ मा कांग्रेसका मंगलदेव गुरुङ निर्विरोध भइसकेका छन् । चामे गाउँपालिकामा ७ सय ११ मतदाता रहेकोमा ६ सय १० मत अर्थात ८५ दशमलव ७९ प्रतिशत मत खसेको थियो ।
यस्तै यता मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका कोन्जो तेन्जिङ लामा विजयी भएका छन् । योसँगै स्थानीय तह निर्वाचन २०७९मा नेपाली कांग्रेसले जितको खाता खोलेको छ । १५८ मत ल्याएर लामा विजयी भएका हुन् ।
भरतपुरमा रेनुलाई पछाडि पार्दै विजय सुवेदी अगाडि
बालेनको पहिलोदिनको निर्णय कार्यान्वयनमै लाग्यो ब्रेकः समर्थकहरु बने निराश, कसले हाल्यो भाँजो ?